Ilay lavaka tsy omby tondro… | NewsMada
Ilay lavaka tsy omby tondro…
Par Taratra sur 26/04/2018
Raha afaka mihaino re, aleo tsy manentsin-tadiny. Raha afaka misaina, aleo mandalina ihany. Marina, maro loatra ny ierehana ho an’ny manana andraikitra ambony amin’ny firenena. Tsy afaka manaraka amin’ny antsipiriany ny zava-mitranga amin’ny firenena ny olona iray. Izany kosa anefa ny hananana olona maromaro, manodidina ny mpitondra: mpanolotsaina, mpiandraikitra isan-tsokajiny, mpanatanteraka, sns.
Fa manao inona daholo ireo? Manisika hevi-diso, sa mampakatra vaovao tsy marim-pototra any an-dapa ka nahatonga ireny trangan-javatra nifanesy ireny? Raha noraisina tamin’ny zava-nitranga, omaly, hay azo atao tsara ihany ny midina an-dalambe, mitondra sorabaventy, manao kabary politika kanefa tsy misy fifandonana sy ra latsaka.
Ambentin-resaky ny maro fa azo nialana tsara ny ra latsaka tamin’ny asabotsy, raha toa ka noraisina hatramin’ny voalohany io fepetra io. Mety vita ny tatitra dia tsy nahita hevitra hafa hitazomana vahoaka intsony aza ny solombavambahoaka… Saingy tsy izay no nisy, namahana basy hitifirana azy ihany ny fitondrana.
“Izao dia izao” indray no malaza etsy Analakely. Fitakiana ny fialan’ny filoham-pirenena io. Tsy ankijery sy ankandalina izay tohiny aloha,fa ny “izao dia izao” ihany ny asisika. Hitaky tetezamita indray ve? Manahy be ihany ny tena mpandalina politika. Lalam-pifidianana mantsy no tsy nankatoavin’ireo “depioten’ny fanovana”, izany hoe, fitsinjovana ny fifidianana filoham-pirenena ny tena anton’ny hetsika. Mbola misy manazava sy mitarika mankany amin’izay lalana izay ve?
Na tsy haka lesona tamin’ny lasa aza, aleo ihany mahay mibanjina tsara ny ho avy. Sao lavaka kely tsy omby tondro akory no hiitatra ka lasa handifotra ny tena. Ny mpitondra ity, miraviravy tanana. Ny mpanohitra, tsy misy paikady mazava afa-tsy ny hitohizan’ny hetsika ihany aloha. Io fa efa manangasanga sahady ny fijabahan’ny avy any ivelany. Ho avy ny “vahiny tompon-trano”, rehefa tsy mahita ny lala-mazava mankany amin’ny fifidianana madio ny rehetra.